We Fight We Win. -- " More than Media ": ပါလီမန် ထဲမှာ စစ်ယူနီဖေါင်း၊ တိုက်ပုံ၊ ခေါင်းပေါင်း ရှိနေသမျှ ပြောင်းလဲလို့ မရနိင်ပါ။
ပါလီမန် ထဲမှာ စစ်ယူနီဖေါင်း၊ တိုက်ပုံ၊ ခေါင်းပေါင်း ရှိနေသမျှ ပြောင်းလဲလို့ မရနိင်ပါ။
သမတဦးသိန်းစိန် က မပြောင်းလဲချင်တဲ့သူတွေ ကျန် ခဲ့မယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။ ဒီစကားက
အလွန် မှန်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ တကမဘာလုံးပြောင်းလဲနေပြီး ကျနော်တို့ မြန်မာ ပြည် သာ
ကျန်ခဲ့နေတာကိုတွေ့ ရတယ်။ အပြောင်းလဲကို သမတကိုယ်တိုင်ကရော ဦးဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ တကယ့်အပြောင်းလဲကို သမတဦးသိန်း စိန် ပြောင်းချင်ရင်တော့ နိင်ငံတကာမှာ
အပြောင်းလဲတွေ အောင်မြင်သွားတဲ့ နိင်ငံတွေကို ကြည့်ရင်
၁။ နိင်ငံရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲ ကြတယ်။
၂။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ပြောင်း လဲကြတယ်။
၃။ အလေ့အထ တွေ ကို ပြောင်းလဲပြစ်ကြပါတယ်။
နိင်ငံရေးကို ပြောင်းလဲ ဖို့ ဆိုတာကတော့ အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ အာဏာရှင်စနစ် က နေ ဒီမိုကရေစီကို အပေါ်ထပ်အဆောက်အုံမှာရော အောက်ခြေအလွှာ အသီးသီးမှာ ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးနစ်မှာ တော့ အလွယ်ကူဆုံးအရှင်းဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင် နိင်ငံတော်ကို သမတ
စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရင်၊ မြို့ တွေကို မြို့တော်ဝန် နဲ့ အုပ်ချုပ်ရပါတယ်။ အထွေအထွေ အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့စီမံခန့် ခွဲရေး ( ထွေအုပ် ) ဆိုတာတွေကို ဖျက်သိမ်းပြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အရပ်ဖက် အုပ်ချုပ်ရေး
တွေမှာ စစ်တပ်က အစားထိုး ၀င်ရောက်နေတာကို အမြန် ရပ်ဆိုင်းပြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
နိင်ငံတော်ကို ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကဘာမာ လုံး မှာ ရဲ နှင့်သာ အုပ်ချုပ်နေတာကို အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ ချုပ်ပြောရရင် သမတ၊ မြို့တော် ၀န် နဲ့ရဲမှုး စနစ်နဲ့သွား
ဖို့ လိုတယ်။ သမတ နဲ့မြို့တော်ဝန်ကို ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ဖုို့ ပါပဲ။ ဒါက ရိုးစင်းပြီး
မြန်မာ ပြည်မှာ အုပ်ချုပ်ရေး ဗျုရိုကရေစီ တခုလုံးက စစ်တပ်သို့ မဟုတ်၊စစ်မှုထမ်းဟောင်း သို့ မဟုတ် စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဆွေးမျိုး များ သာ တလျောက်လုံး ဗဟိုကနေ တိုက်ရိုက်ခန့် ထားကြတဲ့အတွက် ဗျူရိုကရေစီ ဟာ ဌာန တိုင်းမှာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတယ်။
ဒီလူတွေက လက်ရှိစနစ်နဲ့အကျိုးရှိနေတဲ့ အတွက် အပြောင်းလဲကို မလုပ်ခြင်ကြပါ။
သမတ က တမျိုးပြော သူတို့ က တမျိုးလုပ် လုပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခု က အလေ့အထ ကို ပြင်ရပါမယ်။ ဒါကတော့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဖြစ်တယ်။
တိုက်ပုံဝတ်၊ ခေါင်းပေါင်းဝတ် ၊ စစ်ယူနီဖေါင်း ၀တ် ပြီး ပါလီမန် တက် နေသမျှ တိုင်းပြည်က
ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုို့ လုံး ၀ ကိုမရနိင်ပါ။ ကွန်မြူနစ်နိင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုပ်၊ ကန်ဘောဒီယား ၊ ဗီယက်နမ် တို့နဲ့အမျိုးသားရေးနိင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်း ၊ မလေးရှားစက်ပူတို့ မှာ အမျိုးသားဝတ်စုံတွေနဲ့ ပါလီမန် ကိုမတက်ကြတော့ပါ။ ဂျပန်တွေလောက်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းတာ ဘယ်လူမျိုးမှမမှီပါ။ ဂျပန် ဟာ မေဂျီလက်ထက်ကတည်း ဆာမူရိုင်းဝတ်ဆုံနဲ့လမ်းထွက်လာရင် ဖမ်းပြီဒဏ်ရိုက်ပါတယ်။
အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို စတင်ဝတ်ခဲ့ကြပြီး တော်လှန်ပြောင်းရပါတယ်။ မူစလင်နိင်ငံဖြစ်တဲ့ တူရကီမှာလဲ မူစလင် ဘာသာရေးဆန်တဲ့ဝတ်ဆုံကို ချွတ်ပြစ်ပြီး အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို စတင်ဝတ်ခဲ့တာ ၁၉ ၂၀ ကထည်းကဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ တိုက်ပုံကြီးနဲ့ ခေါင်းပေါင်းဟာ မင်္ဂလာဆောင်မှာပဲ ၀တ်သင့်ပါတာ့တယ်။ အလွန်ရီစရာကောင်းတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းဝတ်ဆုံကိုစတင် လေ့ကျင့်ဝတ်ဆင်
ဖို့သမတကိုယ်တို င် တိုက်တွန်း ပါလို့ ရင်းနှီးစွာ အကြံပေးလိုပါတယ်။
ဘာဖြစ်လုို့အနောက်တိုင်းဝတ်ဆုံ ကိုပါလီမန် မှာဝတ်ဖို့ ရီစရာကောင်းတဲ့ တိုက်ပုံ နဲ့ခေါင်းပေါင်းကို မ၀တ်ဖို့ပြောရတာလဲဆိုတော့။ မြန်မာ တိုက်ပုံနဲ့ ခေါင်းပေါင်းဟာ အမျိုးသားရေးကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်။ ကွန်ဆာဗေးတစ် ဖြစ်မှုနဲ့ ခေတ်နောက်ကျမှု တွေကို ကိုယ်စားပြုနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါလီမန် နဲ့ မသင့်တော်တဲ့ နောက်ယူနီဖေါင်းကတော့ စစ်ယူနီဖေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ယူနီဖေါင်းနဲ့ ပါလီမန်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုကတည်းကတော့
အပြောင်းလဲ ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မှာပါနည်း ။
တိုက်ပုံ၊ ခေါင်းပေါင်း + စစ်ယူနီဖေါင်း = ဖက်ဆစ် စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
(တိုက်ပုံ = Nationalism , စစ်ယူနီဖေါင်း = Militarism
Nationalism + Militarism = Fascism )
မြန်မာ ပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ အစိုးရရော ၊ အတိုက်ခံရော ၊လူထုကပါ ဒီအတိုင်းနေလို့ မရတော့ဘူးလို့သိနေကြပါပြီ။ စနစ်တခုကနေ တခုကို ပြောင်းလဲ ကြတဲ့အခါမှာ
တွေကိုပါပြောင်းလဲမှာသာတကယ်အပြောင်းလဲကို ပြုလုပ်လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ တိုက်ပုံနဲ့ ခေါင်းပေါင်း ကို ၀တ်ချင်သလား။ ၀တ်ပါ။
မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ လူမှုရေးမှာဝတ်ပါ။ ပါလီမန် ထဲမှာတော့ ကြည့်ရတာအမြင်မတော်လှပါ။
တကယ့်အပြောင်းလဲကြီးများ ကို အသာထားဦး ကားနံပတ် များ ကို မြန်မာ လို ရေး နေတာကနေ မိခင်ဘာသာ နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်ဘာသာ ရေး သည့်စနစ်ကို
ပြောင်းလဲနိင် ဖို့ လက်ရှိအစိုးရက ကြိုးပန်းသင့်ပါတယ်။နိင်ငံတကာမှာ ကားနံပတ်ပြားကို
minamay loo lar ...
bar phit lae wit tot
16 May 2012 at 23:59
17 May 2012 at 01:53
thar htet said...
17 May 2012 at 10:01
a pyin pan pyaung lal yone nat bar mha phyit ma lar buu. Moe Thee Zun and Ko Mya Aye's daughter ko death sentence pay yin tot I can expect to see some constructive changes in Burma.
18 May 2012 at 10:05
ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေလည်း ရင်ဖုံး ထမီ ပုဆိုး တွေနဲ့ ကျောင်းမတက်ဘဲ နိုင်ငံတကာနဲ့အညီ စကတ်တို ဘောင်းဘီရှည်တို့ နဲ့ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. ဘူးထပြီးပြောတယ်မထင်ပါနဲ့.. ကလေးတွေခမျာ ကြည့်ရတာ မသက်သာလို့.. သူတို့ခေတ်မှာ အပြင်အရပ်ဝတ်အနေနဲ့ ဒီလိုမှ မ၀တ်တော့တာ.. ကလေးပီပီ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေစေချင်တယ်..
21 May 2012 at 12:44